सिंहदरबार भित्रबाटै चोरी भयो सरकारी गाडीको चार वटै टायर - Movies Trends
सिंहदरबार भित्रबाटै चोरी भयो सरकारी गाडीको चार वटै टायर
२ पुस, काठमाण्डौ । देशकै सबैभन्दा बढी सुरक्षित स्थान मानिने सिंहदरबारबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयको सस्पेन्सन ब्रिज शाखाको बा१झ २९२७ नम्बरको टोयटा हाइलक्स गाडीका चारवटै टायर चोरी भएको छ । ना. अ. प. ३२४ नम्बर देखिने उक्त गाडीका चार वटै गायब भएका हुन्।
पछिल्ला दिनमा सिंहरदरबारमा चोरीका घटना बढेको छ । कहिले ल्यापटप हराउँछ र कहिले मोबाइल । हुँदा हुँदा गाडीको टायर पनि चोरी भएको छ । गाडीका चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले शुक्रबार शाखाका प्रमुख गुरुप्रसाद शर्मालाई घर पुर्‍याएर सिंहदरबारभित्रै पार्किङ गरेका थिए ।तर, आइतबार आउँदा गाडीका चार वटै टायर चोरी भएको पाइएको छ । आइतबार विहान प्रमुख शर्मालाई लिनका लागि पार्किङमा आइपुग्दा चारवटै टायर नभेटेपछि श्रेष्ठले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सेना र प्रहरीको २४ घण्टे सुरक्षा रहेको ठाउँबाटै गाडीका टायर चोरी भएपछि सबै अचम्मित परेका छन् । गाडी पार्किङ गरेको स्थान र सेना र प्रहरीको ड्यूटी स्थल मुस्किलले २० मिटरको दुरीमा छ । चोरी भएको एउटा टायरको मूल्य ५० देखि ६० हजारसम्म पर्छ । टायर चोरीबारे अनुसन्धान भइरहेको सिंहदरबार सुरक्षा गणका डिएसपी प्रेम जोशीले जनाएका छन्।
कसरी खुसी राख्ने प्रेमिकालाई ? यस्तो छ केहि उपाय
प्रधानमन्त्री बन्न भारतले गरेको प्रस्तावको प्रचण्डले दिए यस्तो जवाफ